I-Acer Aspire Enye yeengxaki eziphambili-iGeofumadas
NgoJulayi, 2010 Internet kunye neBlogs, yokuzonwabisa
Emva koko unyaka onesiqingatha Ukusuka ekusebenzeni kwi-Acer Aspire One, ukwenza i-CAD / GIS kwinqanaba loqeqesho, ukuthumela, uyilo lwegraphic kunye nokukhangela, apha ndishwankathela eyona ibalulekileyo. Ndizixoxile iingxaki ezine ngokweenkcukacha, kodwa ngoku ndishwankathela malunga nezinye ezine kwaye ndihlalutye ukuba kuyavakala na okanye hayi ukuqhubeka nokunyanzelisa.
Iingxaki eziphambili kunye nezisombululo
1 I odiyo iyazivalela Ndithethile ngenye imini, naphakathi kwamagqabantshintshi sinombulelo, uhlalutyo, ukukhukhumala kunye nokuhlambalaza. Kubonakala ngathi yingxaki eqhelekileyo, kodwa isonjululwe. Ewe kona, asikokumamela ngokuvakalayo; ukuba ufuna ukudibanisa kwiDVD yangaphandle kunye nescreen esikhulu sokubukela iziqendu ze Anathomy Grey Kungcono ukubeka ezinye izithethi zangaphandle.
2 Iingxaki kunye skype, nangona kunjalo kwabonakala ngathi umba we-antivirus, khange ndibenangxaki kwakhona. Ngokubanzi kunxibelelwano lwewebhu, ividiyo ekwi-intanethi kunye nokukhangela kulungile.
3 I ikhibhodiNdisandula ukukhankanya ingxaki ngesitshixo, kodwa ubeko lwamaqhosha ali-105 kwaba matshini ngokuqinisekileyo alulunganga. Indlela ezakhiwe ngayo, kunye ne-eyelash ephephezelayo ngaphezulu kweqhosha elingenantlonelo, kuthetha ukuba nantoni na ukusuka kwisikhonkwane somnwe omncinci ukuya kwinyama enzima inokungena ngaphakathi kwaye yenze isitshixo singasebenzi. Kuyathakazelisa ukuba kumashishini okuxhasa abantu baya ngaphezulu kwengxaki yebhodi yezitshixo kunaso nasiphi na esinye isizathu, ngeedola ezingama-300 behlisa ibunzi, into yokudlala phantsi kwengalo yabo kunye nesiqubulo esichasene nale seva ibacebisayo. Ukusombulula isitshixo kwakungeyondlwan 'iyanetha kum, kwaye ndicinga ukuba abanye abantu abancinci abanolwazi ngeekhompyuter kuya kufuneka babhenele kwinkxaso. Yhu! Uxolo 🙁
4 Ayithumeli ku Datashow. Yayenzelwe loo nto hamba unenkani nge msconfig, kodwa amaxesha ambalwa okuqala abantu bahlala benengxaki ngokulinda iphaneli yokuhambisa ukuba ivele, isetyenziswa ngendlela yesiqhelo yezinye iincwadana. Ngaphandle koko, kunokwenzeka ukuba ngaxa lithile iyeka ukuhambisa, ayenzeki kangako kodwa ngesiqhelo emva kokuqhagamshelwa kumhloli wangaphandle okanye iprojektha, ukuba neenkqubo ezininzi ezivulekileyo okanye into elolo hlobo, ngumbandela wokungabikho kwememori ukuqhubeka nokudlulisa. Kwimeko apho akukho enye indlela ngaphandle kokuqalisa kwakhona, kodwa kunjalo, iqhosha lokuthumela kwiDatha licinezelwe kabini ukuze likwazi ukufikelela kwiscreen selaptop kwaye ucime iinkqubo ukuqala kwakhona.
5. i ibhetri ayilayishi. Oku ndiyivile kakhulu, kwiimeko ezininzi kubonakala ngathi akukho sizathu sinokuhlanguleka kwaye kuyenzeka xa iwaranti iphelelwe lixesha. Kwenzekile kum kube kanye, kodwa ndisusa ibhetri kwaye ndiyibuyisela kwisisombululo.
6 I iplagi Iyonakala. Oku kubi kakhulu, uyilo ekudibaniseni intambo kunye nebhokisi esebenza njengesiguquli imbi kangangokuba ayisasebenzi. Ngokubanzi ngokusonga ngokungathi yi-nacatamal kubhaka, yijerk evela kumntwana odlulayo okanye ngokuyibaleka inamavili esitulo.
7 Iingxaki kunye abaqhubi. Oku kwenzeka kuphela kwabamsulwa, kuba xa benokungazinzi okuthile kwiWindows bayithumela kwigcisa elikhohlakeleyo ukuba lifomathile, kwaye ekugqibeleni liyenze ililize ukubaxelela ukuba alinabaqhubi, alinayo iCD Rom, ukuba alunamsebenzi. Kodwa akuyomfuneko ukuba uye apho, inkqubo ebhuthini inokukhetha kunye ne-F10 ukubuyela kuguqulelo oluzinzileyo, kwaye akukho fomathi iyimfuneko.
8. I manani bawela. Oku kuyenzeka xa siqala ngamanye amaxesha-ngaphezulu kunexesha. Kwenzeka ukuba xa ungena kwi-Intanethi kwipaneli yokufikelela ngeposi, kuba ukugqibezela okugqityiweyo kulungiselelwe, sikhetha umsebenzisi kwaye xa sizama ukubhala i inombolo yokuvula Esibona kuphela ii-asterisks ezisithumela umyalezo ongalunganga. Sizama, intengiso ye-nauseam kwaye ngaphandle kokuba sizama ukubhala kwenye indawo, umzekelo ugoogle safika Umsebenzi wenani uyasebenza kuba iziphumo zingu-g66g3e. Ngenxa yoku, ngokucinezela i-Fn + F11 siyenza ingasebenzi, kodwa ayizukuzisebenzela.
Nangona ndiyabazi abo baphulukene nokufumana iileta zabo ngenxa yokuxhaphaza abaphumeleli kwiinzame zabo nditsho nokulwa nomzala unobuchule ndiyakholelwa koko iqhekeziwe el inombolo yokuvula.
Akufuneki ukuba, kwimpilo yamehlo, eli ayiloqela lokusebenza iiyure ezinde, kuba amehlo asebenza ngaphezulu. Kuyacetyiswa ukuba uhambe, kwaye ekhaya ukudibanisa esweni enkulu. Kwakhona, indawo ekubekwe kuyo izihlahla yinxalenye yelaptop eshushu, enokuthi ichaphazele ukuba emva kweeyure ezininzi zokusebenza uza kuzihlamba ngamanzi abandayo okanye ubambe isoda ebandayo yomkhenkce ... masingaqinisekisi, kodwa ukuba uyayenza Ukuphindaphinda ixesha elide kufana nokuhlamba izandla emva koku-ayina iimpahla.
Kwaye emva koko?
ngokunyaniseka, ukuba iqela elinjalo alusizi, ukuba ne-8 iingxaki ezinje ziphakamisa ukuba kufanelekile ukuthenga enye okanye kungcono ukubuyela kwincwadana enje I-Lapiztop okanye iPDA. Kodwa nazi iingcebiso zam ezivela kwimbono elungileyo emva konyaka onesiqingatha kwaye ndonwabile ngale nto yokudlala… ngaphandle kokuba nezidalwa ezibini eziyisebenzisa iyure ngosuku nje ukukhathalela i-farmville yabo nokubona umsebenzi wasekhaya wosuku olulandelayo.
1. Sisixhobo esisesakho.
Ngale nto ndiyithetha, yeyokusetyenziswa buqu.
Musa ukuboleka intombi yakho eza kuyisebenzisela ukubukela iividiyo zeYouTube, okanye kumhlobo wakho okhupha ii-booger kwaye azishiye apho, okanye kumphathi wakho ofunde kuphela ukuhambisa iingcingo ngokungathi ziziloji, hayi kakhulu ngaphantsi kunyana wakho oza kubetha i-keyboard kanzima ukudlala iMengaman X8.
Isetyenziselwa wena, ukuba uyakhathalela, ukuba une-antivirus ezinzileyo, ukuba awuzifumani izinto zepirish, iyasebenza.
2. Yincwadi yokubhala, hayi i-anvil.
Ingqondo yeNetbook yikhompyuter ethatha indawo yencwadana, ekukukhulula ukuba ukhwele ubunzima Toshiba ngasemva, ukuba ngenye imini kuyakukuhlawulela ingozi yokulimala okanye uya kubiwa esitratweni kuba ayikho enye indlela yokuyiphatha ngaphandle kwengxowa yelaptop.
Ke sukulindela ukwenza imimangaliso ayenzelwanga yona. Nokuba unayo yonke into, ndikwazile ukukhwela iCorel Draw ukwenza iipirouettes, iMicrostation yokusebenzela iimephu, i-AutoDesk Civil3D 2008 yokuthumela imithambo kwaye iyasebenza. Nokuba iArcGIS 9.3 isebenza kakuhle nge “kwincwadana yokubhalela"Oko kukuthi, ukubona, ukuhlela, ukuprinta, ukufunda. Ukungasebenzi kakhulu kuba ubungakanani bokubeka esweni liya kukuhlawula i-retina yesiqingatha ngaphambi kwexesha.
Ukuba ufuna ukusebenza ngokungathí sina, ke uzithengele isigxina seflethi ye23 ”, kwezo zisencinci kwaye ungasebenza ngokuzolileyo eofisini, okanye ngobusuku athi umntwana abukho peluchín.
3. Ibiza kuphela iidola ezingama-300.
Iya kuba ngumququ wokugqibela ukuba sifuna enye into ngeedola ezingama-300 nje kuphela. Ukuba unezikhalazo, zivumelekile kwi-Acer ukuzama ukuphucula le mveliso kwiminyaka embalwa.
Kodwa ukuba ufuna imimangaliso, zithengele ikhithi yokwenyani. Le yinto yokudlala eyenza ngaphezulu kunokuba ungayenza ngePDA, ngakumbi kunokuba ubuya kwenza nge-I-pad, kwaye ngokuqinisekileyo ingaphezulu kunencwadi yamanqaku engamashumi amabini eedola.
Post edlulileyo«Ngaphambilini Iintombi zokuqala zeoli
Post Next Ngaba kufanelekile ukuba neblogi?Okulandelayo »
7 Uphendula "I-Acer Aspire Enye yeengxaki eziphambili"
Ndine Do Aspire One 722, endenze ngokumangalisayo. Izolo, xa ndiyicimileyo, ndafumana isilumkiso esithi »musa ukucima okanye ukhulule izixhobo. Ukufaka uhlaziyo 1 lwe-1 ″.
Idlulile iiyure ezilishumi elinambini kwaye isaqhubeka. Ayivumeli ukutshixwa, nokuba ndizame kangaphi. Ndiyisusile intambo yamandla, kodwa ekubeni ibhetri eyakhelwe ngaphakathi, andazi ukuba mandenze ntoni, ihlala ifana.
NGOKUBA UMNYE UMNTU UNANDINCEDA, NDICELA?
pc kwi-intanethi uthi:
Nokuba i-smartphone ye-Apple inokuhlawulisa i- $ 499 ye-16
IGigabytes WiFi, i-iPed yanikezelwa kutyalo-mali kwiwebhu xa iqwalasela nje i- $ 149 Usd.
Ezinye izinto zithintelwe ngenxa yokuba ziphumelele ngempumelelo i
inyani yokuba i-iPad yomntu yikhompyuter yecompyuter ye-pc.
UJulio Cesasr De La Cruz uthi:
Molo, ndine-acer aspire eyodwa ye-722, kwaye andikwazi ukwenza ii-monitors ezimbini ezizimeleyo ukuba zindazi.
UJulio Cesar De La Cruz
I-Sergio Ramos + Puyol = Amandla uthi:
Ewe ndincoma le yexabiso lemali DELL STUDIO 17 Intel® Core TM i7 quad-core optional. Iprosesa yenye yezona zihambele phambili, isikrini sikhulu, sinekhiphedi yamanani ... Ilungele i-CAD-GIS-IANO. Mhlawumbi inye kuphela kodwa inobunzima obungaphezulu kwesiqhelo. Kula magqabaza e-AcerUusario, khubaza i-TouchPad okanye uphinde ufake umqhubi ofanelekileyo kwikhibhodi.
Molo Federico. Ewe bendikhe ndakhela ikhefu, kodwa ndibuyile.
AcerUsuario. Khange ndiyichaze, kodwa inene, iphaneli yemouse ingena ngendlela ngeminwe yakho kwaye yenza intlekele kwimisebenzi yakho yendlela. Kuya kufuneka uthathe ukuziqhelanisa.
Ungayichazanga eyokuba ikhibhodi isilele njani xa uchwetheza, isikhombisi sam siphantse saxhuma… ayinyamezeleki !!
Kulungile ukubona kwakhona kumfundi wam le nto uyibhalayo.
Umbuliso omkhulu ovela kolu lwando eBogotá.
Intombi yam ine-netbook, kwaye ngaphambi kokuyithenga senza umlinganiso phakathi kweempawu ezithile kwaye sasishiywe nguDell Mini. Iqela elibalaseleyo, kwaye ndakwazi ukukuqinisekisa ukuba ufake uBuntu.
Andihlali nale OS ixesha elide (ixesha elingaphezu konyaka) kwaye ilungile kakhulu. Ndivumelana nento yokugqibela oyithethayo, zizinto zobuqu. Ukongeza, le ncwadana (i-Dell) ibonakala ngathi igqityiwe kwaye ngo-Ubuntu yayibonakala indidibanisa.
Kuyathandeka ukuba ufaka i-ArcGIS kunye ne-CAD kwezi khompyuter, kodwa ukucinga nje oko kundinika into, hehehe
Ndiyabulisa kwaye ndincoma uDell, ibibalasele kum, nindixolele ... ibiyintle kwintombi yam.